China ndị na-emepụta Apple na ndị na-ebu ya | Ihe nketa
Yantai nwere ogologo oge banyere ịkọ apụl na ọ bụ ebe mbụ a na-akọ apụl na China.
Ihe nketa na-eji apụl si Yantai eme ihe site na ngosipụta nke Geographical.
Apụl a mịrị amị na-atọ ụtọ ma nwee ọpụrụiche pụrụ iche na-aga n'ihu site na teknụzụ nketa.
Apụl a mịrị amị nwere vitamin nke nwere ike ịba uru dị ukwuu na ahụ. Apụl nwere ụfọdụ vitamin A na C. Vitamin ndị a na-enyere aka ịkpụkpụ na anụ ahụ gị ike. Apụl nwekwara ọtụtụ vitamin B. Vitamin ndị a na - edozi ahụ gị n’arụ nke na - edozi umeji na akpụkpọ gị.
Apụl a mịrị amị na-enyere ahụ ike gị aka n’ihi mineral. Potassium bụ mineral nke dị mkpa maka akwara ozi na ụbụrụ. O nwekwara ụfọdụ ígwè, dị ka oflọ Ọrụ nke apụl a mịrị amị, nke na-enye ọkara iko nke apụl akọrọ, 8% nke ígwè a chọrọ kwa ụbọchị nke ụmụ nwoke na 3% nke ígwè chọrọ ụmụ nwanyị. Ahụ mmadụ na-eji ígwè a emepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie ọhụrụ. Mkpụrụ ndụ ọbara uhie bụ ọrụ maka ịbuga oxygen na sel. Na mgbakwunye, apụl a mịrị amị nwere mineral ndị ọzọ dịka ọla kọpa, manganese na selenium.
Apụl a mịrị amị nwere ike iwepụ ma ọ bụ belata mgbaàmà ndị a na-ahụkarị dịka akpụkpọ akọrọ, mgbape, pallor, na ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala ma na-adịte aka.
Ekwesiri ighota na ikike nke apụl a mịrị amị bụ n'ihi ọnụnọ nke riboflavin (vitamin B2), vitamin C na A, mineral dị ka ígwè, magnesium, calcium na potassium.
Mgbanwe ọbara mgbali
Iri apụl a mịrị amị na ọbụna ịnụ apụl a mịrị amị nwere ike belata ọbara mgbali. Nnyocha ahụ chọpụtara na naanị otu isi apụl a mịrị amị na-ebelata ọbara mgbali na ndị ọrịa.
Ahụike nke goms
Acids ndị a hụrụ na apụl a mịrị amị na-egbu nje n'oge a na-ata ata na ezé ezé na chịngọm. Wingta apụl a mịrị amị dị ka iji brọsh ekike. Nnyocha na-egosi na apụl a mịrị amị nwere ike ime ka ihe oriri ndị fọdụrụ na ezé na chịngs ahụ dị ọcha ma gbochie ire ere ezé na ọrịa chịngọm. Ọbụna ndị rịara ọrịa chịngọm n'oge gara aga nwere ike irite uru dị elu nke vitamin C na apụl a mịrị amị.
Mkpụrụ na-edozi ahụ na apụl a mịrị amị na-ewusi usoro ezé ike.Ọ na-eme ka enamel na-ewusi elu ma gbochie ezé ịhịa aka.
Ata apụl a mịrị amị na-eme ka akwara agba gị sie ike. Apụl a mịrị amị bụ ihe dị mfe na nke okike na-enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla n'ihi mmetụta mgbochi mkpali ha.
Apụl a mịrị amị ebe nchekwa. Ya mere, ọ bara uru maka ndị na-arụ ọrụ ọgụgụ isi. Ke ofụri ofụri, apụl, n'ihi na ha site, na-ewusi irighiri akwara na ebe nchekwa.
Nke gara aga: Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpọrọ Akọrọ